Search နန်း​မွေစံ hd - GenFK.com
“ဘယ်လိုပဲ တံဆိပ်တပ်တပ် ကိုယ်က ဆရာဝန် တယောက်ပဲ” ဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ
“ဘယ်လိုပဲ တံဆိပ်တပ်တပ် ကိုယ်က ဆရာဝန် တယောက်ပဲ” ဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ (ရုပ် /သံ) ဧရာဝတီ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၄ ၊၂၀၁၈။ "လုပ်ခါစတုန်းကတော့ Share ပြီး ပြောကြ၊ ဆိုကြတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ မခံစားနိုင်လို့ စိတ်ညစ်ဖူးတယ်။ အခုတော့ ရိုးသွားပါပြီ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုပဲ တံဆိပ်တပ်တပ် ကိုယ်က ဆရာဝန် တယောက်ပဲလေ။ ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲ မသွားဘူး။ လက်ရှိလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Photo Model လို့ပဲ ခံယူထားပါတယ်”လို့ Facebook မှာ Sexy ပုံတွေ တင်ရင်း လူသိများလာတဲ့ နန်းမွေစံက ပြောပါတယ်။ အင်တာဗျူး- ချစ်ပိုး ရိုက်ကူး -သက်ပိုင်စိုး / တည်းဖြတ်- နေပိုင်
4 Dec 2018 · 171K views
အမြင်မရိုင်းရင်တော့ လက်ခံပေးစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ
"အမြင်မရိုင်းရင်တော့ လက်ခံပေးစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ" . Sexy Model နန်းမွေစံတစ်ယောက် သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေပြောထားသလဲ? သူဘာလို့ ဒီလိုတွေ ရိုက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာက... #momolaytv #localcelebrity
မိုမိုလေး - Momolay
24 Jul 2017 · 332K views
ဘာစပွန်ဆာမှမရှိဘဲ အနုပညာ လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးလေးတွေအပြင် အိမ်ကလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ အားပေးနိုင်ကြောင်းပြောပြသွားတဲ့ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ ရိုက်ကူး - အ၀ါရောင် #kumudrtatv #kumudranews #nangmwesan
28 Jul 2019 · 119K views
"အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာက ကြာပါပြီ။ သူနဲ့က ခဏလေးပဲပေါင်းလိုက်ရတယ်။ ရန်ဖြစ်ရင် လက်ပါပါတယ်။မွေစံက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပျိုတစ်ယောက်လိုခံယူထားတာ။တစ်လတောင်မရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလေ"ဆိုပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပြလာတဲ့ နန်းမွေစံ။ #MyanmarCele7 #NanMweSann
12 Jun 2019 · 993K views
Nan Hmwe San (Sexy Model)
"တင်ထားတဲ့ ဟာတွေကိုတောင် ပြန်ဖျက်ခိုင်းတာရှိတယ် ပြန်ဖျက်လည်း ဘာမှမထူးတော့ဘူး၊ ယောက်ျားလေးတွေ တော်တေ်ာများများ Save ထားပြီးသားပဲ ဆိုတော့" ဆမ ပိတ်သိမ်းခံရတာနဲ့ပက်သက်ပြီး မော်ဒယ် နန်းမွေစံက ခုလိုပဲ ပြောပြပါတယ် PannPwint #Nann_Hmwe_San #Nang_Mwe_San #နန်းမွေစံ Youtube > https://youtu.be/_DPfHqEX9e0
11 Jun 2019 · 3.5M views